Faah faahin: Dagaal culus oo u dhaxeeya laba beelood oo ka qarxay qeybo kamid ah gobolka galgaduud iyo qasaaraha oo…… | Kismaayo24 News Agency
Faah faahin: Dagaal culus oo u dhaxeeya laba beelood oo ka qarxay qeybo kamid ah gobolka galgaduud iyo qasaaraha oo……
Saturday May 13, 2017 - 2:13 under Somali News by Tifaftiraha K24
Wararka ka imanaya gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in saaka aroortii hore ay gobolkaasi ku dagaalameen laba beelood oo halkaa wada deggan.
Inta la xaqiijiyay lix qof ayaa ku dhintay, sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleedyadaasi ka dhacay deegaanka Labi-caano ee bariga gobolka Galgaduud.
Dagaalka ayaa ka bilowday aano hore oo dhex martay labadan beelood waxaana aanadaas ay keentay in markale maleeshiyaadka labada beelood ay dib u dagaalamaan maadama aan horay loo xalin colaadii horay u dhexmartay.
Xiisad ayaa wali deegaanka ka jirta, inkastoo aan xiligan la soo werin wax iskahor’imaadyo ah balse wararka hada soo baxaya ayaa sheegaya in maleeshiyaadka laba dhinacba ay isku hub uruursanayan waxaana laga cabsi qabaa in markale deegaanka ay dib ugu dagaalamaan.
Ma jirto wax waan waan ah oo ay wadaan odayaasha labada beelood oo ku aadan in dagaalka uusan dib u dhicin sidoo kale maamulka gobolka galgaduud ayaa sheeda ka eeganaya dagaal beeleed-yada kusoo laab laabtay deegaanada iyo dagmooyinka uu ka koobanyahay gobolka galgaduud.
Dagaalada salka ku haya aanada qabiil ee dhexmara beelaha Soomaalida ayaa inta badan ku soo laablaabta dalka.